Dad yar ayaa ku ogaan kara qofka ku soo xadgudbay wax ka yar 25 ilbidhiqsi - Ma heli kartaa isaga? - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Dad yar ayaa ku ogaan kara qofka ku soo xadgudbay wax ka yar 25 ilbidhiqsi - Ma heli kartaa isaga? - CAAFIMAAD PLUS MAG
Waxaa jira tijaabooyin dhowr ah oo kuu oggolaanaya inaad qiyaasto aragtidaada aragga, waxaan si gaar ah u soo qaadan karnaa midkan kaas oo sidoo kale go'aamin doona qarada araggaaga. Si kastaba ha noqotee, midda aan kuugu soo bandhigno qodobkaan ayaa si gaar ah u adag. Runtii, dad aad u tiro yar ayaa awooday inay ku guuleystaan ​​waqtiga loogu talagalay. Ma ka mid tahay?
Tijaabadan, waxaa laguu soo bandhigi doonaa dhowr sawir oo waxaad u baahan doontaa inaad mid kasta oo ka mid ah ku xadgudbe ka hesho. Si kastaba ha noqotee, waxaad yeelan doontaa oo keliya 25 ilbiriqsi oo xariiq ah oo aan ka badnayn Qaado saacada saacadaha saacadaha shaqada oo tag!
Diinaasoorkee ayaa ku xadgudba sawirkaan? Xigasho: Waqti-la'aan.info
Ku soo xadgudubka waa xayawaan qiroweyn leh oo leh kaliya hal lug oo hore. Xigasho: Waqti-la'aan.info
Labiskee ayaa dabbaasha ka baxsan? Xigasho: Waqti-la'aan.info
Waxaa jira qaabab ka maqan dharka dabbaasha. Xigasho: Waqti-la'aan.info
Jinni kee baa ku dhacayaa? Xigasho: Waqti-la'aan.info
Ku soo xadgudubka waa jinka aan afka laheyn. Xigasho: Waqti-la'aan.info
Hibo noocee ah ayaa qaali ah? Xigasho: Waqti-la'aan.info
Waa hilib-dameedka leh hal dheg oo keliya. Xigasho: Waqti-la'aan.info
Waa diiqadee midka aan caadiga ahayn? Xigasho: Waqti-la'aan.info
Waa diiqii aan lahayn calaamado. Xigasho: Waqti-la'aan.info
Imtixaanki wuu dhamaaday! Miyaad heshay dhammaan kuwa ku soo xadgudbay?
Haddii aad wax walba si sax ah u heshay, hambalyo! Dareenkaaga u kuurgeliddu waa mid aad u wanaagsan. Haddii aad rabto inaad sii tijaabiso naftaada, halkan waa jimicsi kale oo kaliya ay ku guuleysteen 7% dadka!
Haddii aad doorbidi laheyd caqligaaga halkii, halkan waa tijaabin qancin doonta xiisahaaga!
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/peu-de-gens-arrivent-a-reperer-lintrus-en-ombres-de-25-secondes-le-trurez-vous/
TELES RELAY 40651 posts 1 comments
ganacsiga sidii caadada u ahayd - Young Africa